Table Top Arina Grill sy Side Afo Box - China Shijiazhuang HGW Trading
Grill Type: Arina Grills
Ary ny latabatra sy ny Top Grill Side Afo Box CR1713 dia saribao lafiny Grill na mpifoka sigara. Tsy interchangeable avy amin'ny Grill ny mpifoka sigara (indray mandeha niova tsy afaka hiverina amin'ny Grill). Ny voalohany indrindra dia 290 mahandro sakafo ambonin'ny santimetatra tora-droa. Ny grates natsipy vy. Izany dia manasongadina ny sliding vatasarihana ho mora ny fidirana amin'ny vainafo sy / na ny lavenona. Ny lavenona vilany dumps mora.
Sheet metaly Black hery mifono
Bakoly enameled fandrahoan-tsakafo & arina Grill
3 Stainless vy sodina tahony
2 Stainless vy rivotra varavarana
Tafavory vokatra Dimensions: 74L * 48W * 58H
Item #: CR1713
Mitady idealy Round BBQ Grill Manufacturer & mpamatsy? Isika manana fantina lehibe amin'ny vidiny lehibe mba hanampiana anao hahazo famoronana. Ny Round Mijoroa Tabletop Grills mitono hena no azo antoka tsara. Origin China izahay Factory ny Tabletop Arina Grill. Raha toa ka manana fanontaniana, Aza misalasala mifandray aminay. Product Categories: Outdoor Product> BBQ Grill
Previous: Grill Square Arina Grill loko mainty
Next: Family tokotany Tabletop BBQ Camping Garden Patio Grill
BBQ Grill Stainless Steel Burners mitono hena amin'ny ...
Grill saribao mitono hena ho an'ny går lasy ivelan'ny trano ...